Topic: Hyundai Genesis | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Used Cars (1335)	Sedan (382)
Home › Forums › Import Procedures › Hyundai Genesis
This topic has2voices, contains2replies, and was last updated by MSoe 248 days ago.
Hyundai Genesis Coupe 2012 ကိုသွင်းလျှင်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုသိရှိချင်ပါသည်။
(0) km Genesis Coupe 2012, ကြိုက်တဲ့အရောင် – CIF ရန်ကုန် = 300-320 LKs (with Full Insurance)
အသေးစိတ် သိလိုပါက “ayuasa@gmail.com” ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ။
3.8L V6, RWD,
Spec details : http://hyundai-uae.com/uae/specs/specs.php?model=22&spec=143
အထူးပါမစ်ကားများအပေါ် အကောက်ခွန် Customs Duty နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Commercial Tax ကောက်ခံရာတွင် လိုင်စင်တန်ဘိုး/ ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဘိုး (ခ) CIF တန်ဘိုး အပေါ်မှီတည်တွက်ချက်သည်။ အကောက်ခွန်တန်ဘိုး Customs Duty တွက်ချက်ရန် အကောက်ခွန်စည်းကြပ်တန် ဘိုး (Actual Value) အား စတင်တွက်ချက်သည်-
Genesis Coupe 2012, 3.8L V6, RWD,
အကောက်ခွန်စည်းကြပ်တန် ဘိုး (Actual Value) AV = လိုင်စင်တန်ဘိုး/ ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဘိုး (ခ) CIFတန်ဘိုးUSD x ငွေလဲနှုန်းကျပ်
ဥပမာ – CIF တန်ဘိုး USD 40,000 for Genisis Coupe 2012 ၊ ငွေလဲနှုန်း (860)ကျပ် ဆိုလျှင်….
AV = 40,000 USD x 860 ကျပ် = 34,400,000/ ကျပ် = AV = 344 LKs
အင်ဂျင်ပါဝါ 2000 CC နှင့်အောက် 30 %,, အင်ဂျင်ပါဝါ 2000CC အထက် 40 %
ယခု တင်သွင်းလာသောကား Genesis Coupe သည် CIF တန်ဘိုး USD 40,000 , 2000CC အထက် ဖြစ်လျှင် အကောက်ခွန် Customs Duty မှာ-
Customs Duty = AV X Customs Duty Rate = 34,400,000 X 4၀% = 13,760,000/-ကျပ်
1. Custom Duty = 138 LKs
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Commercial Tax တွက်ချက်မှုမှာ- Commercial Tax = ( AV + CD ) X 25% = ( 48,160,000) X 25 % = 12,040,000 /-ကျပ်
2. Commercial Tax = 120 LKs
သို့အတွက် CIF တန်ဘိုး USD 40,000 , 2000CC အထက် Genesis Coupe 2012 ကားတစ်စီးအတွက် အကောက်ခွန် Customs Duty (138) LKs ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Commercial Tax ( 120 LKs) = စုစုပေါင်း (258) Lks ကျပ် အားနိုင်ငံတော် သို့ပေးဆောင်ရမည်။
myanmardb customs duty အား ကိုးကားဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးသတင်း အမှန်တကယ်သိသူများ Confirm လုပ်ရန်လိုပါသည်။
This reply was modified 248 days ago by MSoe.
Toyota Hilux Surf	mitsubushi lancer evolution 8, 2000cc	ဆူပါ ကာစတန် ကား ၀ယ်လိုသည်။	RAV4 or PAJERO3doors ၀ယ်လိုပါသည်	Good Morning Everyone	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများRAV4(DIESEL INTERCOOLER TURBO) (71 views)Toyota mark22002 (69 views)mark II (92 ကြောင်မျက်လုံး) (60 views)toyota bB (56 views)mark2(46 views)Harrier (46 views)Suzuki R+ Wagon (45 views)Toyota caldina :ကြက်​တူ​ရွေး ST.210G (43 views)TOYOTA CROWN ROYAL SALOON - G (39 views)Toyota alphard 2002 WITH FRONT &BACK CAMERA (38 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.